Mete Ndị Enyi Ka Owu Ghara Ịna-ama Gị | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Ka M Ga-eme Ka Owu Ghara Ịna-ama M?
1. Mee ka uche gị dịrị n’ihe ndị ị ma eme. (2 Ndị Kọrịnt 11:6) Ọ bụ eziokwu na ọ dị mma ka ị mara ihe ndị ị na-anaghị emeta, ma cheta na o nwere ihe ndị ị na-emeta. Ị mata na o nwere ihe ndị ị ma eme, ọ ga-eme ka ị ghara ịna-eche na o nweghị ihe ị dị mma ya, ọ ga-emekwa ka owu kwụsị ịna-ama gị. Jụgodị onwe gị, sị, ‘Olee ihe ndị m ma eme?’ Chee gbasara ihe ndị ị ma eme na ọmarịcha àgwà ndị i nwere.
2. Na-ahụ ndị ọzọ n’anya. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ibido gosiwa mmadụ ole na ole na ị hụrụ ha n’anya. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Jorge kwuru, sị: “ Naanị ịjụ ndị ọzọ otú ha mere ma ọ bụ otú ọrụ ha si aga ga-eme ka ị matakwuo ha. ”
I nwere ike imeri nsogbu ahụ mere ndị ọgbọ gị ji agbara gị ọsọ
Ihe ga-enyere gị aka: Ndị gị na ha ga na-akpa ekwesịghị ịbụ naanị ndị ọgbọ gị. E nwere ụfọdụ ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl ha na ibe ha bụ ezigbo enyi, ma, e nweghị otú ha si bụrụ ọgbọ. Ụfọdụ n’ime ha bụ, Rut na Neomi, Devid na Jonatan, nakwa Timoti na Pọl. (Rut 1:16, 17; 1 Samuel 18:1; 1 Ndị Kọrịnt 4:17) Ihe ọzọ ị ga-eburu n’obi bụ na mgbe gị na ndị mmadụ na-akparịta ụka, o kwesịrị ịbụ onye kwuo ibe ya ekwuo. Ọ bụghị naanị gị ga-ekwuru na-aga. Obi na-atọ ndị mmadụ ụtọ ma ndị ọzọ na-ege ha ntị. N’ihi ya, ọ bụrụ na ị bụ onye ihere, cheta na ọ bụghị naanị ga-ekwucha ihe niile. O nwekwara mgbe ị ga na-ege ege!
3. ‘ Ka ihe banyere onye ọzọ na-emetụ gị n’obi. ’ (1 Pita 3:8) Ọ bụrụgodị na i kwetaghị ihe onye ọzọ na-ekwu, medaa obi chere ka o kwuchaa. Kwuo gbasara ihe ndị gị na onye ahụ kwekọrịtara na ha. Ọ bụrụ na i chere na ọ dị mkpa ka i kwuo uche gị n’ihe ụfọdụ unu na-ekwekọrịtaghị, meda obi kwuo ya; ekwukwala ya otú ọ ga-akpasu onye ahụ iwe.
Ihe ga-enyere gị aka: Na-agwa ndị ọzọ okwu otú gịnwa ga-achọkwa ka ha si na-agwa gị. Ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ na-arụkarị ụka, gị ana-edowe ọnụ otú ọ bụla dị gị mma agwa ha okwu, na-akparị ha, jiri ha na-eme ihe ọchị ma ọ bụ na-egosi ha na ị ka ha bụrụ ndị ezi omume, ọ ga-eme ka ha na-agbara gị ọsọ. Ma, ha ga na-abịa gị nso ma ọ bụrụ na i mee ‘ ka okwu gị dịrị n’amara mgbe niile. ”—Ndị Kọlọsi 4:6.
Ihe Ndị Ị Ga-eme Ka Owu Kwụsị Ịna-ama Gị
Owu ọ̀ na-ama gị? Jiri akwụkwọ a chọpụta ihe mere owu ji ama gị na ihe ndị ị ga-eme ka ọ kwụsị.
Ọ dị mfe mmadụ inweta ndị enyi ọjọọ, ma olee otú ị ga-esi enweta ezigbo enyi?